दाँतको समस्या र दुखाइ बाट पिडित हुनुहुन्छ ? दाँतको दुखाइबाट छुटकारा पाउँन यसो गर्नुहोस् ! | सुदुरपश्चिम खबर
दाँतको समस्या र दुखाइ बाट पिडित हुनुहुन्छ ? दाँतको दुखाइबाट छुटकारा पाउँन यसो गर्नुहोस् !
तपाई ३६ वाला कम्मरलाई घटाएर २६ बनाउन चाहानुहुन्छ ? पिउनुहोस् यो स्पेशल ड्रिंक
फाल्गुन १५, २०७७
के तपाईंको पिसाब रोक्ने बानी छ ? निम्तन सक्छ यस्ता समस्या !!
हामीले मुख्य आहारबाहेक गुलियो, बिस्कुट आदि खाद्यपदार्थ खाएलगत्तै राम्ररी कुल्ला ग¥यौँ भने दाँतको समस्या हतपती हुन पाउँदैन । पानीले कुल्ला गर्दा दाँतमा अडकिएर बसेका अन्नकणहरू सहजै बाहिर निस्किन्छन् र दाँत सफा हुन्छ ।
हाम्रा गाउँघरतिर दतिवनले दाँत माझ्ने गरिन्छ । अझ त्यहाँ मौसम विशेषअनुसार नीम लगायतका विभिन्न वनस्पतिको हाँगालाई दतिवन बनाएर दाँत माझ्दा यसले मुख स्वास्थ्यमा विशेष फाइदा पु¥याउने मान्यतासमेत छ ।
तालु र जिब्रोतिरको खण्डलाई सफा गर्न ब्रसको अगाडिको खण्ड उपयोग गर्नुपर्छ । ब्रस गरेपछि राम्ररी कुल्ला गर्नुपर्छ र गिजालाई हल्का मालिस गरेर पुनः राम्ररी कुल्ला गर्नुपर्छ । बिहानजस्तै रातिसमेत यसै प्रकारले नियमित ब्रस गर्ने प्रक्रिया दोहो¥याउनुपर्छ । दाँत सफा गरेपछि जिब्रोसमेत सफा गर्न बिर्सनु हुन्न ।
शरीरको अंगमध्ये दाँत सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसले सौन्दर्यता दिन्छ । यसको सौन्दर्यतालाई खाने कुराबाट नै ध्यान दिने हो । जथाभावी रुपमा खानु हुँदैन । जे खानेकुरा खाए पनि दाँतलाई समयमा सफा गर्न भुल्नु हुँदैन । नियमित उपचार नै दाँतको सौन्दर्यताको उपयुक्त बिकल्प हो ।
सुर्ती र चुरोटले प्राणघातका रोग निम्त्याउँछ । दाँत दुख्दा निको पार्न खाने पेनकिलरले किड्नी र अन्य अंगलाई असर पु¥याउँछ । चिकित्सकको सल्लाहमा औषधि र पेनकिलर प्रयोग गर्नुपर्छ । जथाभावी औषधि प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
तपाईलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो ? हाम्रो जानकारीहरु अरुलाई पनि देखाउन कृपया सेयर गर्नुहोला । तपाइको एक सेयरले थाहा नभएकाहरुले ज्ञान पाउछन भने हामीलाई पनि सहयोग हुनेछ । धन्यवाद ।
(urlabarinews.com बाट साभार)
महिनावारीका बेला कति समयमा प्याड परिवर्तन गर्नु राम्रो ? ध्यान दिनैपर्ने कुरा !!
काठमाडौंमा बर्डफ्लु देखिएपछि, साढे १५ हजार पन्छी नष्ट, पशु विभागले जारी गर्यो यस्तो अपिल !!!
यत्रतत्र पाइने तितेपातीका फाइदाहरू के–के छन् ? जानकारीको लागी शेयर गरौं !
फाल्गुन १२, २०७७
धनी वा सफल हुने टिप्सहरू!
रुघाखोकी बाट ग्रसित हुनुन्छ ? कसरी लाग्नै नदिने ? लागेपछि कसरी उपचार गर्ने ?
महाशिवरात्रिको अवसरमा बैतडीमा भलिबल प्रतियोगीता हुँदै
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधब पक्षको बैतडी जिल्ला कमिटिको बैठक भोली बस्दै !!
जन्मसमय अनुसार यसरी थाहा हुन्छ तपाईको भाग्य !!
वेदकोट नगरपालिकाको आठौं नगर सभा सम्पन्न (फोटो पिचर)